वोर्ड अध्यक्ष पौडेलको सोचप्रति पूजा शर्माको आपत्ति ! « Ramailo छ
वोर्ड अध्यक्ष पौडेलको सोचप्रति पूजा शर्माको आपत्ति !
समय : 4:01 pm
भदौ २२ गते दुई फिल्म ‘रामकहानी’ र ‘रोजी’ जुध्दैछन् । नायिका तथा निर्मात्री पूजा शर्माले आफ्नो फिल्मसँग ‘रोजी’ आएको दोष चलचित्र विकास वोर्ड अध्यक्ष निकिता पौडेलालाई दिएकी छन् । अध्यक्ष पौडेलकै योजना अनुसार ‘रामकहानी’सँग रोजी जुध्न आएको पूजाको आरोप छ । बुधबार दिउँसो फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै पूजाले वोर्ड अध्यक्ष पौडेलप्रति कटाक्ष गरेकी हुन् । गोपिकृष्णले बनाएको रोजीलाई निकिताका भाई निरक पौडेलले बनाएका हुन् । पूजाको स्टाटस यस्तो छ :
विकाश वोर्ड अध्यक्ष, निकिता पौडेल ज्यू, विकाश वोर्ड जस्तो संस्था जुन नेपाली चलचित्रको विकास र नेपाली चलचित्रकर्मीको हकहितको लागी सर्वश्रेष्ठ संस्था हो । त्यस्तो सस्थांको अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा बस्नु भएको छ । नेपाली चलचित्र क्षेत्रको अध्ययन, योगदान र विकास को ठूलो ठूलो भाषण र मन्तव्य दिनुहुन्छ । चलचित्र विकास वोर्डको महिला अध्यक्ष भनेर चलचित्रकर्मीको सहयोग र सिम्पेथी पनि लिनुहुन्छ । तर एउटा यस्तो सस्थांको अध्यक्ष भएर चलचित्रकर्मीलाइ साथ र सहयोग गर्दै सबैलाई मिलाएर चलचित्रको विकासमा ध्यान दिनु भन्दा एउटा महिलाले नै निर्माण गरेको चलचित्रसंग जुधाएर कुन चाँही विकासको लागी लड्दै हुनुहुन्छ ? तपाइले मेरो चलचित्र “रामकहानी“ संग जुधाउनु पर्छ भनेर गरेको प्लान बारे पनि जानकारी पाइसकेको छु । यो कस्तो चलचित्रको विकास गर्दै हुनुहुन्छ ?
जबकि तपाइलाई थाहा छ मैंले (६) महिना पहिलै भदौ २२ गतेको दिन रामकहानी को प्रदर्शन गर्दैछु भनेर । तर पनि यसरी जुध्न आउनु राम्रो हो र ?
मेरो चलचित्रसंगै तपाइले आफ्नो चलचित्र रिलिज गर्नुमा मलाई कुनै आपति होइन तर तपाई जुन संस्थामा बसेर चलचित्रको विकासको कुरा गर्नु हुन्छ त्यो कुरामा आपत्ति हो, अध्यक्ष ज्यूको सोचप्रति आपत्ति हो । यो त चलचित्रको विनाश भएन र ? जय नेपाली सिनेमा र जय रामकहानी !